कोरोनाको राहतमा भ्रष्टाचार ः कागजमा ३० किलो, हातमा ७ किलो ! - समृद्धि खबर
कोरोनाको राहतमा भ्रष्टाचार ः कागजमा ३० किलो, हातमा ७ किलो !
समृद्धि खबर, ४ असार २०७७, बिहीबार,
बाजुरा । बडिमालिका नगरपालिका–८, कोठ्याराकी बिन्द्रा रावल ३० चैत २०७६ मा कोभिड–१९ को राहत बुझ्न वडा कार्यालय पुगिन् ।
कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुध्न गरिएको लकडाउनले बिचल्लीमा परेका गरीब, असहाय र श्रमिक परिवारलाई नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत राहत बाँड्दै थियो ।
राहतले केही दिनको भए पनि गुजारा चल्ने आशमा वडा कार्यालय पुगेकी बिन्द्रा त्यहाँबाट फर्कंदा निराश भइन् । वडाले दिएको राहतले १३ जनाको उनको परिवारलाई त्यही दिन बेलुकीको छाकमात्रै ट¥यो ।
‘३० किलो चामल, दाल र तेल पाइन्छ भनेकाले केही दिनलाई ढुक्क भो भन्ने लागेको थियो, तर त्यो चामलले साँझको छाक पनि मुस्किलले ट¥यो’ बिन्द्राले भनिन्, ‘हामीलाई पाँच किलो चामल दिए, तर, ३० किलो दियौं भन्ने लेखेर पठाए ।’
बडिमालिका नगरपालिकाले तयार पारेको वडा नम्बर ९ को राहत पाउने सूचीमा उनको नाम ६८औं नम्बरमा छ । त्यसमा उनले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझिलिएको उल्लेख छ । तर, उनले पाएको जम्मा सात केजी चामल मात्रै हो ।
बडिमालिका–९ मा राहत पाउने सूचीको पहिलो नम्बरमा खुड्के चदाराका छोरा जहरे चँदाराको नाम छ । नगरपालिकामा रहेको सूचीमा उनले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझेको विवरण छ । तर, आफूले जम्मा सात केजी चामल, एक केजी दाल र एक प्याकेट नून मात्रै पाएको उनी बताउँछन् ।
नगरपालिकाको अभिलेख अनुसार, बडिमालिका नगरपालिकाले ९ वटै वडामा लकडाउनको मारमा परेका गरीब र असहायलाई राहत वितरण गरेको छ । तर, त्यसको बिल भर्पाई एकथरी छ भने राहत पाउनेको यथार्थ अर्कै छ ।
जस्तै– पानी पिउने प्लाष्टिकको मगलाई दुई केजीको भाँडा मानेर चामल र दाल वितरण गरिएको छ । तर, बिल भर्पाईमा त्यसरी ३० केजी दिइएको देखाइए पनि सात केजीभन्दा बढी कसैले पाएका छैनन् । कोही कोहीलाई त दुई केजी चामल दिएर ३० केजीको भर्पाईमा सही गराइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ मा प्रत्येक परिवारलाई ३० केजी चामल लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी रूपमा यो मापदण्ड पालना गरिएको झूटो विवरण तयार पारिएको छ । यहाँ कसैले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार राहतमा पाएका छैनन् ।
पार्वती र नन्दाजस्तै यो वडामा पूरा राहत पाउने सूचीमा रहेका १५९ जनाले नै पाँच केजी चामलभन्दा बढी राहत पाएका छैनन् । अझ अनौठो उदाहरण हेरौं–
वडा कार्यालयले तयार पारेको राहत वितरणसम्बन्धी विवरणमा अहिले तनहुँमा रहेका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् । विवरणमा समेटिएका पविन्द्र शाहीलाई १५ केजी चामल वितरण गरिएको उल्लेख छ । तर, शाही अहिले तनहुँमा बस्छन् र उनी तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको रोजगार संयोजकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् ।
बडिमालिका नगरपालिका–२, माझीगाउँका नन्दे दमाईको आठ जनाको परिवार छ । सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपथ्र्यो । तर, पाए १० केजी चामल, एक केजी नून र तेल एक लिटर मात्र । पूरै राहत पाउनुपर्ने बडिमालिका नगरपालिका–२ की धौली साउले पनि १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक लिटर तेल र एक केजी नून मात्र पाइन् ।
मापदण्ड अनुसार आधा राहत पाउनुपर्ने बडिमालिका–१, सल्यानाका रामबहादुर कार्कीले पनि आठ केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नून र एक लिटर तेल मात्र पाए ।
१३ जनाको परिवार रहेका सोही गाउँका अंगे रोकायाले पनि १९ केजी चामल, दुई केजी दाल, दुई केजी नून र दुई लिटर तेल पाए । मापदण्ड अनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपथ्र्यो ।
सरकारी मापदण्डमा सम्बन्धित वडाले राहत वितरणसम्बन्धी अभिलेख साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, राहत वितरणमा बदमासी गरिएकै कारण बडिमालिका नगरपालिकाले राहत वितरणको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छैन ।
बडिमालिका–९, उखाडीका गचे चदाराका छोरा गाउँको एक बाहुन परिवारको हलो जोतेर छाक टार्ने गर्छन् । नगरपालिकाले दिएको राहतमा उनी पनि ठगिए ।
बडिमालिका–९, उखाडीमा पूर्वहलियाको एउटा बस्ती छ । तर, यहाँका मुक्त हलियाले आजसम्म कुनै सरकारी सेवा सुविधा पाएका छैनन् । लकडाउनको असरबाट जोगाउन नगरपालिकाले दिने राहतमा पनि उनीहरूमाथि उही व्यवहार भएको छ, कागजमा पूरै राहत पाएको देखाएर थोरै राहत दिइएको छ ।
जस्तो कि हिरा चँदाराको सातजनाको परिवार छ । आफ्नो खेतबारी छैन । आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । पहिले साहूको खेतबारीमा काम गरेर परिवार पाल्ने हीराले हलिया मुक्तिको घोषणापछि त्यो काम पनि गुमाइन् । त्यसपछि बगरको बालुवा सदरमुकामसम्म बोकेर गुजारा चलाउँदै आएकी उनले लकडाउनपछि त्यो काम पनि गुमाइन् ।
दुई छाक टार्न सकस परेका बेला नगरपालिकाले राहत दिने कुराले हिरालाई हौस्यायो । केही दिनलाई भए पनि समस्या ट¥यो भन्ने लाग्यो । तर, वडा कार्यालयबाट राहत बुझेर फर्कंदा उनी खिन्न थिइन् ।
‘मलाई सात किलो चामल, एक पोको तेल र आधा किलो दाल दिए । ‘यति चामलले मेरो परिवारको निधारमा अक्षता लगाउनू’ भनेर सोधें, उनीहरूले ‘सबैलाई यति नै दियौं, तिमीलाई कहाँबाट बढी ल्याएर दिनू’ भनेर फर्काए’, हिराले सुनाइन् ।
उखाडीकै गचे लुहारले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नून, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन पाएको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । हामीले उनलाई सोध्यौं, तपाईंले यो सबै पाउनुभयो ? उनले भने, ‘यो झूटो हो । हाम्रो नाममा आएको राहत नेताले खाइदिए । गरीबले पाउने राहत काटेर खाइदिने नेतालाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
यसैगरी राहतमा ठगिएका शौरे लुहारले भने, ‘रेडियोले फुके अनुसार राहत नदिएपछि हामीले सोध्यौं । उनीहरूले हाम्रो वडा ठूलो भयो, सबैलाई पु¥याउनुपर्ने भएकाले अलि अलि दिएको हो भनेर टारे ।’
खेती गर्ने जग्गाजमीन र आम्दानीको अरू केही बाटो नभएका पूर्व हलियाको भाग पनि खोसेर खाइदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे, ‘हामी भोकानांगा मानिसलाई दिएको राहत पनि खाइदिनेहरूलाई पाप र धर्म भन्ने त लाग्ला नि !’
बडिमालिका–९ उखाडीको हलिया बस्ती । यहाँका बासिन्दालाई पनि ठगियो ।
नगरपालिकाको विवरणमा चामल रु.१३ लाख ७७ हजार ९९३, नून रु.१९ हजार ६२९, दाल रु.३ लाख ६९ हजार ८५०, तेल रु.२ लाख ६९ हजार ७०५ बराबरको वितरण गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै साबुन रु.१ लाख ८५ हजार १५०, माक्स रु.१ लाख ५७ हजार ४००, प्लास्टिक रु.१ हजार ७५०, ढुवानी रु.१ लाख २९ हजार ५०० खर्च भएको देखाइएको छ ।
राहत वितरण गर्दा चिया खाजामा रु.३८ हजार ५१५, गाडीभाडा रु.१ लाख १३ हजार, सरसफाइ रु.७ लाख २४ हजार ३८५ र नगद वितरण रु.१२ लाख ३२ हजार ५०० देखाइएको छ ।
बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर १ को राहत वितरणको सूचीको क्रमसंख्या १३७ मा नाम समावेश गरिएकी पार्वती पण्डितले आठ केजी चामल, एक प्याकेट नून, एक प्याकेट तेल र एउटा साबुन पाएकी छन् ।
सोही नगरपालिका–२ का प्रभते कार्कीले चाहिँ २० केजी चामल पाएका छन् । बडिमालिका–३ की फापु विष्टले सरकारी मापदण्ड भन्दा १० केजी कम अर्थात् २० केजी चामल, एक केजी दाल, एक प्याकेट नून, एक प्याकेट तेल र एक डल्लो साबुन पाएका छन् ।
त्यस्तै बडिमालिका–४ की पार भण्डारीले १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नून र एउटा साबुन मात्र पाएका छन् । तर, उनीहरू सबैलाई मापदण्ड अनुसार नै राहत बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।
गचे चदारा साहुका कृषि औजारमा धार लगाएर आएको पैसाले जहान पाल्ने गर्छन् । राहतमा ठगिएको थाहा पाएपछि उनी आक्रोशित छन् ।
बडिमालिकाका ९ वटै वडामा सरकारको मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गरिएको छैन । तर, राहत पाउनेलाई मापदण्ड अनुसार नै पाएको भर्पाइमा सही गराइएको छ ।
नगर प्रमुख पदम बडुवाल भन्छन्, ‘वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राहत वितरण समिति निर्माण गरिएको छ । त्यसमा सबै दलका नेता छन् । नगरपालिकाबाट गएको राहत मापदण्डअनुसार नै छ । तर, मौखिकरूपमा गाउँमा राहत नपुगेपछि सबैलाई पु¥याउन खोज्दा थोरै भएको होला ।’
बाजुरा जिल्लामा राहत वितरणमा भएको ठगीको चर्को विरोध भएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य काशी विश्वकर्माले भने ‘जनतालाई राज्यको मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गरिएको छैन । वडाहरूले पानी हाल्ने जगले हचुवामा चामल वितरण गरेका छन् । तर ३० किलो चामल पाएको फर्जी कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ । यो सरासर भ्रष्टाचार हो, संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।’
‘कोरोना भाइरसको जोखिम तथा प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यस नगरपालिकामा भएका प्रयास सन्तोषजनक रहेको, ‘. असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा विपन्न वर्गका २२ सय ८२ घरपरिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण शीर्षकमा राहत तथा व्यवस्थापनतर्फ रु.४० लाख ४६ हजार ९११ खर्च गरिएको छ ।’
यस्तो नक्कली कामलाई नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर किन पारित ग¥यो ? बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी यज्ञराज अर्याल भन्छन्, ‘मैले त्यो डकुमेन्ट बनाएको होइन, त्यसको अभिलेखीकरण वडाले पठाएको र हामीले भुक्तानी मात्र गरेको हो ।’
बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावलले वडामा आएको राहत सबैलाई पुग्ने गरी एकनाशले बाँडेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कतै पाँच केजी कतै १५ केजी बाँडेको भन्ने कुरा होइन ।’
वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार बिकले पनि यस्तै भने, ‘नगरपालिकाले हाम्रो भागमा कम रकम विनियोजन ग¥यो, हाम्रो जनसंख्या धेरै भयो । हामीले प्रत्येक घरमा सात केजी मात्र चामल बाँडेका हौं । ३० केजी पाउने कोही छैनन् । चामल नपुग्ने भएपछि हामीले मिलाएर बाँडेका हौं ।’ Online khabar बाट
# big_news # business # Health # popular # thought
Labels: big_news, business, Health, popular, thought